ေအာင္လ နဲ႔ ဗီရာ တို႔ ထိုးသတ္မယ့္ ပြဲ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုင္းကေ န ၾကည့္ၾကမလဲ ? - .
Homeၾကားသိရသမွ်ေအာင္လ နဲ႔ ဗီရာ တို႔ ထိုးသတ္မယ့္ ပြဲ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုင္းကေ န ၾကည့္ၾကမလဲ ?
ေအာင္လ နဲ႔ ဗီရာ တို႔ ထိုးသတ္မယ့္ ပြဲ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုင္းကေ န ၾကည့္ၾကမလဲ ?
October 9, 2019 admin ၾကားသိရသမွ် 0
Part2ပြဲစဥ္ေတြကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ 13 ရက္ေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္း ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ 2.30 မွာ စတင္မွာပါ။ ေအာင္လ နဲ႔ ဗီရာ တို႔ ထိုးသတ္မယ့္ အခ်ိန္ကေတာ့ ညေန 5.00 နာရီမွာ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီပြဲစဥ္ကိုေတာ့ Skynet မရွိသူေတြ အေနနဲ႔ MRTV Entertainment ကေနလဲ ျပသသြားမယ္လို႔ ကနဦး သတင္းေတြ အရ သိရပါတယ္။ ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ sport myanmar
ယူနီကုဒ္ျဖင့္ဖတ္ရန္ လာမယ့် အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ ကတော့ အာရှက MMA ပရိသတ်တွေ အတွက် ထူးခြားတဲ့ နေ့တစ်နေလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အဲဒီနေ့မှာ တစ်နေကုန် One Championship ပွဲစဉ်တွေကို တိုက်ရိုတ် ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ အမည်ကို One : Century လို့ အမည်ပေးထားပြီး ၊ One Championship သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် အခမ်းနားဆုံးနဲ့ အာရှ ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး MMA ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲအတွင်း ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တာတွေရဲ့ ချန်ပီယံလုပွဲပေါင်း များစွာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ပွဲကိုလဲ Part 1 နဲ့ Part2ဆိုပြီး ခွဲခြား ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ Part2ရဲ့ အဓိက ပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ ရဲ့ ညနေခင်းလောက်မှာ စတင် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ကြဖွယ်ရှိနေပါတယ်။Part 1 ပွဲစဉ်တွေထဲမှာတော့ အမျိုးသမီး Atomweight World Championship လုပွဲ အဖြစ် စင်္ကာပူက နာမည်ကျော် ဖိုက်တာ အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ တရုတ်သူ ရှောင်ဂျီနန် တို့က ထိုးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Grand Prix Championship ရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေကိုလဲ ဒီကဏ္ဍမှာပဲ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ရေးပြ အစီအစဉ်ကိုတော့ မနေ့က ဂျပန်မှာပဲ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီး ၊ ဗီရာဟာ အောင်လ ရဲ့ ခြေထောက်ကန်ချက်တွေကို ခုခံဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လာတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဟန်ရေးပြသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူဟာ ဟန်ရေးပြတဲ့ အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာပဲ ချွှေးတွေ တော်တော်ထွက်နေခဲ့တာကြောင့် ၊ သက်လုံး ပိုင်းတော့ အားနည်းနေတယ်လို့ ယူဆချင်စရာပါ။အောင်လ ကြိုးဝိုင်းထဲကို ဟန်ရေးပြဖို့ ဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ဂျပန်က ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက် ကြိုဆိုခဲ့ကြသလို ၊ မြန့်မာ့ သူရဲကောင်းကြီးကလဲ တိုက်ကွက်မျိုးစုံကို ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။
Part2ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်း မြန်မာ စံတော်ချိန် 2.30 မှာ စတင်မှာပါ။ အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် အချိန်ကတော့ ညနေ 5.00 နာရီမှာ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ Skynet မရှိသူတွေ အနေနဲ့ MRTV Entertainment ကနေလဲ ပြသသွားမယ်လို့ ကနဦး သတင်းတွေ အရ သိရပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် sport myanmar
အရိ​ေမ​ေတၱယ် ဘုရား႐ွင္​ အားဖူး​ေတြ႔လိုလွ်င္​ လုပ္​ရမည္​့ ကုသိုလ္​ (၁၀) မ်ိဳးကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္